हे… कान्छा दिक्तेल बजार, माया लाउँ भनेर आउँछन् हजार…. मिठो स्वर र संगितको गीत बसमा घन्किएको छ। बसको भित्र सिटको क्षमताभन्दा बढि मान्छेहरु छन्। दिनमा 1/2 बस गुड्छन्, जसरी पनि गन्तव्यमा सबैलाई पुग्‍नु छ। धुलोको त कुरै →
“Go on that way! →
स्थानीय मिडियाको अनुसार, इजिप्टको भूमिमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा भयानक आतंककारी हमला हो। मस्जिदभित्र शुक्रबार प्रार्थना गरिरहेको बेला पहिला दुई वटा ठूला बम विस्फोट भएका थिए। त्यसपछि हतियारधारीले फायरिङ सुरु गरेका थिए। →
काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्र गरी दुइ चरणमा मंसिर १० र २१ गते हुँदैछ। नेपालमा दुईवटा निर्वाचन एकैपटक हुँदैछन्। नयाँ संविधान अनुसार गर्नुपर्ने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा १० गते र बाँकी ४५ जिल्लामा २१ गते →
नयाँ करारका चारवटा सुसमाचार (मत्ती-यूहन्ना) येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउने सर्वाधिक विश्वसनीय र प्रारम्भिक जीवनीहरू हुन् । यी चारवटै सुसमाचार येशूको स्वर्गारोहणको केही वर्षभित्रमा नै लेखिए । मत्ती र लूकाका सुसमाचारहरूमा उहाँको जन्मको विवरण दिइएको भए तापनि सुसमाचारीय दस्तावेजहरूमा येशूको जन्मको साल, महिना र गते कतै पनि उल्लेख छैन । त्यसैले, उहाँको वास्तविक जन्म मिति हामी कसैलाई पनि थाहा छैन । तथापि उहाँ लगभग ४ ख्रीष्टपूर्वमा जन्मनुभएको थियो भन्ने सामान्य सहमति छ । बाइबल धर्मशास्त्रसाथै कुनै पनि प्राचीन बाइबलेतर स्रोतमा उहाँको जन्म मिति उल्लेख नभएकोले प्रारम्भिक ख्रीष्टियानहरूका बिचमा कुनै निर्धारित मिति थिएन । उहाँको जन्मदिन निर्धारण गर्नको लागि विभिन्न विधिहरू अप्नाइए । परिणामतः प्रारम्भिक ख्रीष्टियान मण्डलीहरूमा बेग्लाबेग्लै मितिहरू देखा परे । जनवरी २, अप्रिल १८, अप्रिल १९, मे २०, र डिसेम्बर २५ त्यस्ता मितिहरू थिए । तर डिसेम्बर २५ (पौष १०) नै ख्रीष्टमसको लागि औपचारिक मिति हुन पुग्यो । चौथो शताब्दीको उत्तराद्र्धतिर आइपुग्दा ख्रीष्टमस भिन्नाभिन्नै स्थानमा भिन्नाभिन्नै मितिमा भए पनि प्रायजसो मण्डलीमा मनाइन थालियो । →
कन्स्टेन्टाइन महान् रोमी साम्राज्यका सन्ताउन्नौँ सम्राट् थिए जसले ख्रिस्टाब्द ३०६-३३७ सम्म शासन गरे । मण्डली र साम्राज्य दुवैको इतिहासमा तिनको शासन परिवर्तनको निर्णायक बिन्दु साबित हुन पुग्यो । इतिहासकारहरू तिनलाई पहिलो ख्रीष्टियान सम्राट्को रूपमा हेर्छन् । →
In recent years, the celebration of attempts to transform oneself from male to female, or female to male, and the normalization of same-sex attraction, including so-called “same-sex marriage,” have reconfigured the global landscape of sexual ethics. →
बाइबल अध्ययनको क्रममा आज पहिलो कोरिन्थी ३:१६ र १७ पदलाई मनन् गर्नेछौं। “१६ के तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरू परमेश्‍वरका मन्‍दिर हौ, र परमेश्‍वरका पवित्र आत्‍मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्‍छ? १७ कसैले परमेश्‍वरको मन्‍दिरलाई नष्‍ट गर्छ भने परमेश्‍वरले त्‍यसलाई नष्‍ट गर्नुहुनेछ। किनकि परमेश्‍वरको मन्‍दिर पवित्र हुन्‍छ, र त्‍यो मन्‍दिर तिमीहरू नै हौ।” →
तैपनि म निरन्‍तर तपाईंसँगै छु, →
The best way to get offaguilt trip is to first admit your guilt. Don’t bury it, don’t deny it, and don’t ignore it. →
नयाँ करारका चारवटा सुसमाचार (मत्ती-यूहन्ना) येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउने सर्वाधिक विश्वसनीय र प्रारम्भिक जीवनीहरू हुन् । यी चारवटै सुसमाचार येशूको स्वर्गारोहणको केही वर्षभित्रमा नै लेखिए । मत्ती र लूकाका सुसमाचारहरूमा उहाँको जन्मको विवरण दिइएको भए तापनि सुसमाचारीय दस्तावेजहरूमा येशूको जन्मको साल, महिना र गते कतै पनि उल्लेख छैन । त्यसैले, उहाँको वास्तविक जन्म मिति हामी कसैलाई पनि थाहा छैन । तथापि उहाँ लगभग ४ ख्रीष्टपूर्वमा जन्मनुभएको थियो भन्ने सामान्य सहमति छ । बाइबल धर्मशास्त्रसाथै कुनै पनि प्राचीन बाइबलेतर स्रोतमा उहाँको जन्म मिति उल्लेख नभएकोले प्रारम्भिक ख्रीष्टियानहरूका बिचमा कुनै निर्धारित मिति थिएन । उहाँको जन्मदिन निर्धारण गर्नको लागि विभिन्न विधिहरू अप्नाइए । परिणामतः प्रारम्भिक ख्रीष्टियान मण्डलीहरूमा बेग्लाबेग्लै मितिहरू देखा परे । जनवरी २, अप्रिल १८, अप्रिल १९, मे २०, र डिसेम्बर २५ त्यस्ता मितिहरू थिए । तर डिसेम्बर २५ (पौष १०) नै ख्रीष्टमसको लागि औपचारिक मिति हुन पुग्यो । चौथो शताब्दीको उत्तराद्र्धतिर आइपुग्दा ख्रीष्टमस भिन्नाभिन्नै स्थानमा भिन्नाभिन्नै मितिमा भए पनि प्रायजसो मण्डलीमा मनाइन थालियो । Read More…